Hong Kong: Tahotra Ny Hery Famoretana Toy Ny Tany Tiananmen Raha Mitohy Kosa Ny Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2014 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, čeština , Español, English
Nampanjelanjelatra ny Admiralty ireo mpanao fihetsiketsehana an'arivony, distrikan'ny fandraharahàna sy fifanakalozana ara-barotra ao afovoan'ny tanàna, ny alin'ny 29 Septambra.
Nosoratan'i Oiwan Lam ary nalefa voalohany tamin'ny teny Shinoa tao amin'ny sehatra median'ireo olom-pirenena inmediahk.net, ny 29 Septambra, ny mombamomba ilay hetsi-panoherana ao Hong Kong, mitaky ny fifidianana marina sy malalaka amin'ny governemantan'ny tanàna sy ny amin'i Beijing. Nadikan'i Stan Moon izany, mpikambana ao amin'ny fikambanana mpandika teny HKDemoNow ao amin'ny Facebook, ary naverina nalefa tao amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Taorian'ny nanatrehany maso ny fampiasàna tafahoatra ny entona mandatsa-dranomaso hanaisorana ireo mpandàla ny demôkrasia nanao hetsika tamim-pilaminana, avy tamin'ny mpitandro ny filaminan'i Hong Kong, olona maro tao Hong-Kong no nitsangana ary nanjohy ny fitokonana natao tany amin'ireo distrikan'ny fandraharahana, tao anatin'izany i Admiralty, Causeway Bay ary Mongkok. Nikatso tanteraka nandritra ny roa andro ny fifamoivoizana tao amin'ny tanàna, fa naneho ny fanohanany ireo mpanao fihetsiketsehana ihany anefa ireo voakasik'izany, niaraka tamin'ny finoana fa tsara kokoa ny sahirana ao anatin'ny fotoana voafetra noho ny hotantananà “mpitantana ratsy” any aoriana any.
Mino i Chan Kin-man, iray amin'ireo mpikarakara ilay fitorevahana faobe, nomena anarana hoe “Occupy Central”, fa ny fametraham-pialàn'ny filohan'ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong Leung Chun-ying, no hany vahaolana amin'izao kirizy izao. Nanamarika tamin'ny famoriana mpanao gazety i Chana fa ilaina ny maka fiatombohana vaovao ho an'ny dingam-panovàna ara-pôlitika. Nitaky tamin'Ji asper Tsang lehiben'ny Filankevitry ny Solombavam-bahoaka ihany koa ireo mpanao lalàna Pan-demokratika mba hivory manokana hanao fitsipaham-pitokisana ilay filohan'ny mpanatanteraka.
Taorian'ilay famoretana feno herisetra, niaiky tao amin'ny fandaharan'ny radio i Fanny Law, mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Mpanatanteraka, fa nahatezitra ny vahoaka ny zavatra nataon'ny mpitandro ny filaminana ary tokony hanazava ny fanapahan-keviny any amin'ny Filankevitry ny Mpanatanteraka izy ireo.
Tahotra ny hiverenan'ny hetsi-pamoretana tao amin'ny Kianja Tiananmen saingy amin'ny endriny kely
Mpikambana iray hafa ao amin'ny Filankevitry ny Mpanatanteraka, Regina Ip, naneho ny fanohanany feno ny fanohanany ny hetsiky ny mpitandro ny filaminana, nandritra ny dinidinika iray hafa tao amin'ny fandaharan'ny fampielezampeo. Resy lahatra izy fa “nifototra tamin'ny fahafahantarana ny zava-misy” ny fanapahan-kevitry ny mpitandro ny filaminana, ary noeritreretina “hitondra vokany mandresy lahatra.” Taminà tafatafa ho an'ny South China Morning Post, Gazety an-tsoratra amin'ny teny anglisy, namboraka izy fa natahotra ny governemantan'i Hong Kong, izay fari-piadidiana manokana ao Shina, hoe hikononkonona “korontana kely toy ny tany Tianmen” ireo mpianatra tsy tonga nianatra fa nanaraka ireo mpanao fihetsiketsehana, ary hahatonga hetsi-panoherana mihoson-drà avy amin'ireo miaramila, mitovy tamin'ny zava-nitranga tao Beijing nandritra ny fihetsiketsehan'ireo mpomba ny demôkrasia tany, ny taona 1989.
Tato anatin'ny volana vitsivitsy lasa, niparitaka tany anivon'ny andaniny roa, ny mpomba ny fitondrana efa mipetraka sy ny ankolafy mpanohitra, ny eritreritra hoe mety hiverina indray ny vono olona teo amin'ny Kianja Tiananmen, indindra taorian'ny nitakian'i Chen Zuo-er, mpiasam-panjakana ao Beijing, izay mpiandraikitra ambony ao amin'ny raharaha ao Hong Kong sy Makaô, ny hampiasana ny “fomba fiadin'ny varatra” mba hampitsahatra ny hetsi-panoherana “Occupy Central”. Niely ihany koa ireo tatitra sy sary mampiseho hoe efa alim-be, nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay, dia hita eny amin'ny arabe ao afovoan-tanàna ireo fiara mifono vy avy amin'ireo Tafi-Panafahan'ny Vahoaka (People's Liberation Army) (araka ny fiantsoana ny miaramilan'ny Shina). Ny 29 Septambra, nandefa lahatsoratra maneho ny heviny ny Global Times, mpitondra tenin'ny Antoko Kaominista Shinoa, nanome hevitra ny hitadiavan'ny governemantan'i Hong Kong ny fanampian'ny mpitandro filaminana mitam-piadiana avy any amin'ny tanibe mba hanampy azy hanatsahatra ilay “fihokoana”.
Nampiseho ny fanazavan'i Regina Ip fa nahazo alalana avy tamin'ny governemantan'i Hong Kong ny hetsi-pamoretana nataon'ny mpitandro filaminana mba hisorohana ny fidirana an-tsehatry ny miaramila avy any Beijing. Na dia nanome tsiny ireo mpikarakara ny hetsi-panoherana “Occupy Central” namoha varavarana ho amin'ny fisian'ny “Hetsi-pamoretana kely amin'ny endriky ny Kianja Tiananmen” aza ireo mpanao pôlitika mpomba ny governemanta, fantatr'izy ireo tsara fa avy amin'ny hery ivelan'i Hong Kong ilay fihetsika feno herisetra, saingy samy matahotra be daholo ny rehetra mba hanonona ny anaran'izay tena tao ambadika nikotrika iny “Hetsi-pamoretana kely amin'ny endriky ny Kianja Tiananmen” iny.
Tafiditra any am-pianarana ny Pôlitika
Taorian'ny nanombohan'ny tsy fandehanana mamonjy efitrano fianarana sy fitokonan'ny mpampianatra avy tamin'ny Federasiônan'ny Mpianatra ao Hong Kong sy ny Fikambanan'ny Mpampianatra Matianina ao Hong Kong (HKPTU), efa ho ny toeram-pianarana ambony rehetra no nifamory tsy namonjy efitrano fianarana ny 29 Septambra. Maherin'ny ampolony ireo sekoly ambaratonga faharoa no namaly ny antso tamin'ny fanangonana mpianatra teo amin'ny toeram-pianarana, izay noraketin'ireo mpianatra tamin'ny sary nalefa ao amin'ny media sosialy. (nanangona tamin'ny Facebook ireo sary maromaro avy tamin'ny tsy fankanesana an-tsekoly nataon'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa sy ny fivoriamben'ny sekoly ny inmediahk.net).
Fantatra hatrizay ho mpitàna ny fomba taloha ny Fikambanan'ny Kolejim-Behivavy Shinoa any Hong Kong, amin'ireo fehezan-dalàna hentitra ao an-tsekoly. Na dia tsy niala ny fianarana aza ireo mpianatra androany, nitafy akanjo ambony mainty izy ireo sady nanao famoriana mba hanentanana ireo mpianatra teo an-tokontany nandritry ny fotoana fakàna aina, fakan-drivotra ary fisakafoanana. Sary nalefanà mpianatra tao amin'ny Facebook-ny inmediahk.net.
Namoaka fanambaràna ny Minisitry ny Fampianarana nanehoany ny alahelony momba ny fiantsoan'ny HKPTU fitokonana; ny Federasiônan'ny Mpampianatra Matianina ao Hong Kong, mpanohana an'i Beijing (HKFEW) dia niantso ireo mpampianatra hanohy ny asany ary tsy hanao resaka politika ao amin'ny toeram-pianarana.
Nandray fepetra ireo sekoly amin'ny ambaratonga ambony tarihanà mpomba an'i Beijing mba tsy hamelàna ireo mpianatra hanao famoriana amin'ireo toerana misokatra. Ohatra, ny Sekoly Ambony Wong Cho Bau izao, sekoly eo ambany fitantanana mivantan'ny HKPTU, tsy namela ireo mpianatra hiditra ny toerana fialàna hetaheta sy ny tokontanim-pianarana. Miparitaka haingana any amin'ireo media sosialy ny vaovao momba ny famoretan'ny sekoly ary misy ireo efa nahazo ny diplaomany no niverina tany an-sekoly ary naneho ny fanohanany ireo mpianatra zandriny teo ivelan'ny vavahadin'ny sekoly. Nitondra mazava ho azy ny politika ho ao an-tsekoly ilay famoretana tao anatin'ny toeram-pianarana.
Miparitaka hatrany amin'ireo distrika hafa ny hetsi-panoherana “Occupy Central”
Voabodo nandritra ny 48 ora mahery ny Connaught Road, Yee Wo Street, ary Nathan Road ao Mongkok, ny 30 Septambra. Misy hatrany ireo mpandray anjara vaovao tonga eo amin'ireo toerana ireo mba handray anjara amin'ilay fitorevahana. Nitafatafa taminà mpiambina amin'ny alina tonga nanjohy ny Occupy Central tao Mongok taorian'ny nahavitany ny asany ny alina ny mpanao gazetin'ny Inmediahk.net, ny 29 Septambra. Nanambara tamim-pahasorenana izy hoe: “mitondra basy ihany koa aho, fa tsy hanondro iny amin'ny olona mihitsy!” Nisafidy ny hiverina hamonjy ireo faritra misy ny hetsi-panoherana ireo mpianatra sasany taorian'ny fianarana, miaraka amin'ny finoana hoe “Tsy afaka ny hamono anay rehetra ianareo!” — teny faneva nampiasaina matetika tamin'ireo fihetsiketsehana vao haingana.
Arah ny fandrakofana lalindalina ataonay ao amin'ny : Hong Kong's Umbrella Revolution (Ny Revolisionan'ny Elo Ao Hong-Kong)